Inona no fampiasana MC nylon |
Cast nylon dia iray amin'ny plastika injeniera be mpampiasa indrindra, indrindra eo amin'ny lafiny mekanika amin'ny maha fitaovana maharitra sy mihena ny akanjo fanoloana ny metaly nonferrous toy ny varahina sy ny alloys. Ny vokatra nilona milanja 400 kilao dia manana volavola azo ampiasaina mitovy amin'ny vy 2,7 ​​taonina na varahina 3 taonina. Ny ampahany matevina amin'ny nilony cast dia ampiasaina hanoloana ireo faritra varahina tany am-boalohany, izay tsy manatsara ny fahombiazan'ny mekanika fotsiny, mampihena ny fikojakojana malama, fa manitatra indroa na intelo koa ny andavanandrom-piainana mahazatra. Noho izany dia ambany ny fikajiana vidin'ny fitaovana nilonan'ny cast, ary mora kokoa noho ny metaly nonferrous ny fitanisana azy. Ny vokatra lehibe dia: gazy plastika, fantsom-bozono, gazy vita amin'ny nilona, ​​tsorakazo nilona, ​​kodiarana nilona, ​​rouliter conveyor, pulley nilona, ​​sns.
Raha ny lafiny famokarana dia azo alefa 0,2 ka hatramin'ny kilao an-jatony. Noho ny halafon'ny vidin'ny fitaovana sy ny bobongolo tsindrona, ny fampiasana nylon nylon dia plastika injeniera vaovao novolavolaina tamin'ity taona ity. Manana tombony bebe kokoa noho ny polyamide mahazatra (nylon):
1) Hery mahery mekanika, fanoherana avo lenta, fanoherana tsara hitafy, teboka miempo avo, solika fotaka, fanoherana ny harafesina ary fanoherana ny rano.
2) Ny fitoniana mizana dia tsara, miaraka amin'ny toetra mampiavaka ny fahaleovan-tena, ary ny refin'ny habe dia tsy voafetra.
3) ambany ny vidiny, lava ny androm-piainana, 50% -70% ihany ny vidin'ny vy tsy ferrous, ary ny androm-piainana matetika dia 2-3 heny noho ny an'ny vy.
MC nylon dia manana rindrambaiko marobe isan-karazany, toy ny turbine, gears, tsorakazo ary takelaka fitarihana amin'ny milina tsotra. Amin'ny milina mavesatra toy ny tanany hazo amin'ny milina fitrandrahana, crusher, tsorakazo mampitohy, fantsom-baravarana, zana-by amin'ny milina simika, sns. Mpanaparitaka rano amin'ny tilikambo mangatsiaka, tsorakazo piston amin'ny fiara fitaterana, mpanasa tantely amin'ny milina fanerena, fiara mifono solika, peratra famehezana ary fitaovana ao amin'ny orinasan-java-maneno, manakana ny milina hidina ao anaty fiara mifono vy, sns. , ampahany amin'ny hery, ampahany mampihena ny fifandonana, ampahany amin'ny tsindry, ampahany amin'ny haingon-trano na fizarana fandidiana, derain'ny mpandraharaha iray izy.